Zvaungaita Kuti Udzidze Nokuda Kwokukudzidzira Chirongwa Chirongwa - Method Makia
Kukosha Kwokudzimudza Kumusoro Kwekudzidzira Kuwedzera Kudzidzira
Chii chinouya mupfungwa paunoona kana kunzwa izwi rokuti "kupisa-up"?
Kana uchisangana nechishamiso kana iwe uri kukwana nhasi kana zviri nani kunze, unofanira kuziva kuti hausi wega. Kupisa-moto kunowanzoonekwa sekunakidza, uye chaizvoizvo kusina maturo, saka vanhu havaiti zvakakwana. Kuva nemanzwiro akafanana munguva yakapfuura, taita mimwe mienzaniso yekuita Method Makia-kudzidzisa kudziya-ups, kana Routine Rwokugadzirisa Shanduro sezvatinoritumidza, rakakosha kunyange kune munhu anonyanya kufarira mafomu kuti vanhu havazombozviregereri - city tour pachacamac god. Asi tisati tapfuurira mberi, ngatitarisei mubvunzo unokosha unobatana nekudziya-up Ndechipi chikonzero chekuzviita?
Fungidzira iwe uchirara semucheche. Nenguva isipi, mwenje inoenderera mberi, uye mumwe munhu anouraya pasi mafomu ako ekudzorera mutero pamberi pako kuti uzadze imomo. Zvadaro, uye panguva imwe chete, unokumbirwa kuti utaure kuti chipiri chipiri mamiriro ekunze akaita sei, mazita ambuya navanasekuru vako ndeyei, uye osarudza imwe yeinishuwarenzi yakasiyana yakasiyana inokupa iwe akagadzirira kugamuchira. Ungadai uine zvose zvinotungamirirwa here? Chinhu chimwe chete chinoitika kumuviri wako kana iwe uchimumanikidza kuti uende usina kufambisa kupisa. Mumuviri wako unomutswa kamwe kamwe, uye unotumira uropi hwako mharidzo, asi zvose zvinoitika mukufamba kwenguva. Sero rimwe nerimwe mumuviri wako riri kuti "Chii? Zvino?" Chikamu chemuviri wako chinokanganisa mabheki, chimwe chikamu chinotyisa, uye chese chinongova chichi. Kana kushungurudzika kusina kuiswa kamwe kamwe, asi uchiri pamwero wakaoma, muviri hauna nguva yekukurumidza kupararira kwako, uye mugumisiro wakakwana zvakakurumidza-kudarika-kupererwa kwese.
Wake Upself Up
Zvechokwadi, shoko rakanyatsokodzera kupfuura kudziya-up rinomutsa. Nzira yakanaka yokumutsa inoita muviri wako kugadzirira kuenda. Masero emasumbu ari kugadzirira kuita chibvumirano, kupararira kweropa kunobudirira mukubvisa acids, zvingotsigira / zvinogadzirisa mishonga dzakagadzirira kutora matambudziko. Chiedza chinovhenekera, muviri wako wakamuka, uye wakagadzirira kuita zvizere.
Zvakakosha mukusimudzira hurongwa hwemitsipa, mafundo, uye zvinotsigira / zvinogadzirisa mishonga kuti zvigadzirire kugadzirira. Izvi zvinogonesa kubudirira zvakanakisisa nekuchengeteka. Zvinotendwa kuti chinangwa chikuru chekutambanudza ndechekudziya misikidzi kumusoro kuitira kuti usadzivirire mitsipa yakasvibiswa uye inopera. Muzvokwadi, muviri unoporesa mishonga yakanyunguduka zviri nani pane zvigadziriswa zvakasvibiswa uye zvinotsigira / zvinobatanidza mishonga. Apo sangano remagetsi "rakarara", mishonga yako inonyanya kuitika kukuvara, kunyanya panguva yekurovedza inosanganisira kufamba kwakakurumidza. Zvechokwadi, kupisa misungo yako zvakakosha kudzivisa kukuvadzwa uye kuve nekubudirira kwekudzidzisa kwako. Zvakakosha kuteerera kumitumbi yako kuitira kuti mishonga irege "kutya" uye "hit the brakes" vasati vadzidziswa. Kukurudzira kutambanudza kunodawo kuitika zvishoma pakutanga uye kana chete apo kupisa-kwakaitika kwakaitika kutenderera kunogona kuwedzerwa kunosanganisira nzvimbo dzakanyanyisa. Kutuka kwakanaka, asi kumutswa kunotorwa kune zvakanyanyisa kunenge kusingadikanwi kuti uite zvekuita muviri.
Arousal Routine Of Method Makia
Pamberi payo chaiyo yeMethod Makia maitiro anotanga, chiitiko chinokurudzira chinoitwa, uye chinomutsa muviri wako wakagadzirirwa chaiwo yeMet Makia maitiro.
Saka chii chakanaka pamusoro pe Prehab? Zvechokwadi, chinhu chakakosha ndechokuteerera chinangwa. Our Prehab inoumbwa nemafaro anofadza, akangwara, uye anoshanda anomutsa zvikamu zvose zvemuviri wako zvakananga kubva pakuona kwekudzidzisa muviri. Zvisinei, takaona zvakare zvishoma. Our Prehab inosanganisira "saka hutano" mazamu akadzika anobatsira kumusana nemabvi ako, maziso, marara, uye mafudzi ekufambisa anosimbisa muviri wako mukugadzirira kune dzimwe nzira dzinoda kukurudzira muviri. Chimwe chikwata chakanaka chiri nyore uye chinokurumidza kuita nekutevera vhidhiyo.